Ukukhangela kunye nezwi le "Bosch" (inqaku le-3 ye-3) - I-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, i-Broadcastaster ye-NAB Show Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Okufumaneka » Ukukhangela kunye neNgcaciso ye "Bosch" (inqaku le3 le-3)
Ifoto yesemva kwendawo Bosch abasebenzi, kunye nombhali uMichael Connelly wesibini-ukusuka kwesobunxele ngaphambili kunye nomlobi-mlimi uTom Bernardo ngasekunene kweConnelly. Umlimi oPhezulu uPetereter Bru Bruge (inqatshulwa) ngqo emva kukaConnolly ngasemva.
Amanqaku amabini okuqala kule ngqungquthela agxile kwiminikelo yabalathisi kunye nabamafilimu abanika ama-Amazon Prime Video Bosch Iingqungquthela zethelevishini ezibonakalayo zimnyama, zibukeka zibukhali. (Olu luchungechunge luncike kwiimvoki zengxelo ezifunyenwe nguMichael Connelly, onomvelisi olawulayo kwimbonakaliso.) Kule sigaba sokugqibela, ndiza kuthetha nabaculi ababonisa umyalezo oyingqayizivele, Umqambi womculo uJese Voccia.
Umculo Bosch kufuneka ibonakalise umoya omnyama, okhutshwe ngokomzwelo weendaba ezikhankanywe ngolu chungechunge. Ngethamsanqa, uVoccia, owayekade esebenza ngaphezu kweefilimu ze-60, wayekuloo mngeni. Wandixelela ngendlela ajoyina ngayo uluhlu lweqela lokudala. "Xa ndijoyine umqhubi, sasingaphantsi kwexesha elithile," kuchaza. "Sasinokuba malunga neentsuku ezintandathu ukuyila isimboli somculo size sibhale isiqendu sonke. Bonisa umgijimi u-Eric Overmyer kunye nomlimi uPiereter Jan Brugge weza kwi-studio yam kwaye sasixoxa ngeengxoxo zakudala malunga noko Bosch Umsindo womculo kufuneka uzive. Sathetha ngokweminye iifilimu, umculo kunye neencwadi, sathetha malunga neendawo ezahlukeneyo zaseLAN kunye nendlela abaye bavezwa ngayo kwiimboniso nakwiimidlalo kwiTV. Ukususela kwintlanganiso yokuqala, kwacaca ukuba abazange bafune uhlobo lomxholo womculo weempawu. Ba befuna Bosch ukuba ube nolunye uhlobo oluthile okanye olunomtsalane wengubo yomculo. Umculo uza kubandakanywa nemingeni yangaphakathi kunye neenkqubo zengqondo kunokuba kubonakale umsebenzi obonakalayo kwiskrini.
'Ndahamba iintsuku ezimbalwa ndaza ndafumana amanqaku amanqaku okuqala. Ngenhlanhla ngenxa yam, bayayithanda. Inkqubo yayilula kuba beyazi into ababeyifunayo kwaye sathi sithatha ixesha lokuthetha ngenene. Ndandula ke ndakwazi ukufumana indlela efanelekileyo yokubonisa. Emva kwexesha elithile, siye sahlakulela ukukwazi ukuthetha ngomculo. Abalinganiswa bobuboniso bekhulile kwaye bebeninzi. Ngoku sinamava amaninzi kunye neentlanga eziza kuvela ukusuka kwindawo yokuqala ukuxoxa ngomculo. "
Xa ebuzwa malunga neyiphi i-Bosch ngaphandle kwezinye iiprojekthi azisebenzisayo, uVoccia waphendula wathi, "Into yokuqala ehambayo yiyo 'isilumkiso esilungileyo. Ngonyaka ngamnye Bosch Kuninzi nje encwadini enezahlulo, kunokuba uluhlu lweziqephu. Ngeendlela ezininzi, kufana ne-movie yeeyure ye-10. Oku kusivumela ukuba siqhubeke nokubhala ibali ngokulinganisela okuphezulu 'kweenkcukacha' kwinqanaba leenkqubela phambili.
"Esi sikhokelo sethu se-episodic, oku kukhulula ixesha lokugxila kwimimandla eyahlukileyo yabalinganiswa nobudlelwane. Kwakhona kusenza sikwazi ukuxhathisa amaninzi amaninzi kunye nezibophelelo 'zokubulala izixhobo zomculo' kunye nokudala into endiyibiza ngokuthi 'Bosch Burn.' Ukutshiswa kudalwe xa ibali lihamba ngaphandle kokuphazanyiswa kwaye ukuxhatshaza kwakha kwaye kwakha kwaye ngokukhawuleza kukho ubukhulu obuphezulu kunye nokuqonda kwimeko yomntu kunye nomoya wendawo. Ngokuqhelekileyo xa umculo ungeniswe kwi-equation, unomdla wokukhupha umda wokuzakhela kwaye uhambise imodeli yokubhala ibali ukusuka kwintetho. Enye yemingeni ephambili kwimibukiso yindlela yokujoyina umculo kunye ne drama, kunika ukuba umlinganiselo wesimo sengqondo okanye umsebenzi wokubhala ibali, uphume kwaye uqhubeke ushushu. Bosch njengoko umboniso unendlela ye-idiosyncratic yokugaya phambili kwaye iphindwe kabini kwiinqanaba. Ngokusebenzisa umculo kwimisebenzi yokuziphendulela ngokucwangcisayo, kunokuba ezo ndlela ziqhelekileyo, siyakwazi ukuzisa into entsha kwi-genre. Ingcinga eninzi ihamba apho umculo uqala kwaye uyeka Bosch. "
Ndathetha kuVoccia ukuba, ngelixa ephulaphule umculo wakhe Bosch, Ndivile amacandelo okukhumbuza uBernard Herrmann kunye nezinye iindinyana ezandikhumbuza ngoJohn Barry, ngokukodwa ekusebenziseni iintambo. Ndacinga ukuba ngaba abaqambi beefilikhi beempawu ezimbini babe nefuthe emsebenzini wakhe. "Hayi!" UVoccia waphendula. Amanqaku kaBernard Herrmann amafilimu e-Hitchcock anempembelelo enkulu kum. umqhubi weteksi, Fahrenheit 451, yaye Vertigo kuza ngokuqhelekileyo kwimemori yam yomculo. Ukusetyenziswa kukaHermann kweebhloko zakhe eziphindaphindiweyo kunye neendlela zakhe ezingabonakaliyo kunye neendlela zokudlala ezikhuthazayo. Kukho i-vibe kumculo wakhe othi 'ubudala hollywood'ngendlela engenzi mntu omnye kum kwaye ngamanye amaxesha ndizama ukufaka ezinye zazo Bosch njengenxalenye yokusigxininisa los Angeles/hollywood Ngileyo.
"UJohn Barry wamkela ubuncinci bam. Ndandibhaqa uJames Bond njengengane kwaye ndibukele ezo mafilimu ngamakhulu amaxesha. Kanye njengoko ndiyithanda umtya wakhe ukubhala oko kwakungeyena nto yayingumngxuma wakhe. Enye yezinto endithanda ngayo yindlela eyakukunciphisa ngayo kwilizwe elingafaniyo ngokukhawuleza, nokuba ungekho ngokukhawuleza uhamba ngaphantsi kwamanzi, phantsi kwebala elimnyama, okanye kwi-gravity.
"Ndicinga ukuba phakathi kwabaculi befilimu kukho uhlobo lweBeatles kunye nempahla yamatye ehamba noJohn Williams noJerry Goldsmith. Ndihlala ndihlala ngigxina kwiQembu leGoldsmith. IChinatown yayiyinxalenye enkulu yencoko yethu yokuqala Bosch kwaye andizange ndizuze ngokwenene. Ngendlela yam, ndizama ukusebenza kwezinye zeempembelelo kwi-instrumentation, emopheres, nakwezinye izinto ezincinci. IChinatown Ekuqaleni yayinexesha elichanekileyo kwaye wonke umntu uyayithiya. I-Goldsmith yangena kunye ne-rescore ngokukhawuleza kwaye yenza into enesibindi kwaye ingavumelekanga. Ndizama ukuthwala eso sifundo kunye nam xa ndihleli phantsi ukubhala.
"Omnye umqambi oye waba nefuthe elikhulu kum ndicinga ukuba uboniswe kulo Bosch umculo nguToru Takemitsu. Udibaniso lwakhe lwezinto eziculiweyo zomculo kunye nokuxubusha komculo kunye nezandi zendalo zintsikelelo ndizisebenzisa rhoqo kwi-show. Ukubukela iifilimu zakhe, ndisazixhomekeka ngama-webs ayifaka kwi-story arcs. Udibaniso lwakhe lwempembelelo yesiFrentshi kunye nomculo wesiJapan wendabuko awunakunyaniseki ngokupheleleyo. Kwakhona ukufakwa komculo wakhe, ukungena kunye nokuphuma kuyinto eqaqambileyo njengomculo ngokwawo. "
Ndaphinda ndatshela uVoccia ukuba ndandichukumiseka ngokusetyenziswa kwamanye amarekhodi e-artists Bosch. Esinye isandi sokumculo esandicinga ukuba sasisichukumisa kakhulu sasisekuqaleni kwesiqephu esithi "Igazi phantsi kweBridge" (Ixesha le3, isiqendu 5), xa abacuphi bamapolisa babetyelele umfazi ukuba azise ukuba unyana wakhe ufunyanwe wabulawa. Indawo yayihamba kunye neCharlie Haden yokurekhoda i-"home Home". "Ndabuza uVoccia ukuba uthatha njani isigqibo sokuba uya kusebenzisa nini na ukusetyenziswa kwezinto ezikhoyo kwiimpawu zakhe. Waphendula wathi: "Ngu 100% uMichael Connelly." "Unothando olunzulu nolwazi lomculo we-jazz. Wade wenza ifilimu yombhali malunga ne-saxophonist uFrank wabiza Isandi sokuXholwa. UMichael Connelly uyazi ukuba ngubani odlala kwii-albhamu ze-jazz ngendlela abafana abanezinwele zebhasi abazi izibalo zebhola kwiibhayisikobho zamandulo. Uninzi lwezigqibo zomculo kwimbonakalo zivela ngqo kwiincwadi zakhe. UHarry Bosch ungumthandi omkhulu we-Jazz kwaye kukho ukubhekisela rhoqo kwiindawo ezithile zeengoma ezithile kwiincwadi.
"Ngenye yeendima zam intandokazi. Ndiyabulela gqitha ukuba sisebenzise iirekhodi zangempela. Idala umoya ofudumele kwaye uzukileyo kwaye unzima. Ibonisa uHarry Bosch ngokugqibeleleyo kwaye idala ubunzulu obunjalo kumntu wakhe kunye nomboniso jikelele. Kwakhona kunceda ndihlale ndiqhuba njengendlela yokumelana nomculo engiyidalayo. Ukuba kwisakhelo esifanayo njengoko izitifiketi zivuyisa. Ngamanye amaxesha ndiza kubiza umntakwethu, ongumculi, kwaye athi "Yintoni endiyenzayo? Akunto nto ... nje ukubhala isigxina esivela kwezinye Coltrane! "
UVoccia waya kwiinkcukacha kwi-mechanics yokurekhoda umculo wakhe. "Ku Bosch kunye namanqaku amaninzi, ndidlala zonke izixhobo ngaphandle kwamacilongo, "kuchaza. "Umxube wangempela wezinto ezirekhodiweyo zangempela malunga ne-60 / 40. Ndenza nayo yonke ubunjineli kunye nokuxuba. Ndiyathanda ukudlala umculo kwaye ndiyayithanda ubunjineli.
"Kubahloli, ndisebenzisa i-PMC IB1s, i-Genelec 1030 kunye neentetho ezincinane ze-Auratone. Cishe yonke into ibhalwa ngebhanki ye-BAE 1084 preamps kunye ne-Mod Bootsy ibe ezimbini ze-UA Apollo. Omnye ka-Apholo kukurekhoda kwaye enye isethaphu njenge-patchbay yokuqokelela kwam ama-processors avela kwi-70 kunye ne-80. Ndine-Korg SDD-3000, i-Roland RE-201 Space Echo, i-Lexicon PCM60, i-70 ne-80, kwaye i-Eventide H3000 imisiwe njengoko ithumela evela kwi-Digital Performer. Isixhobo esiyimfihlo nokuba yi-Lexicon Prime Time 93 kwi-1979. Ndiyisebenzisa ukudala zonke iintlobo zeempawu ezimnandi kunye neesampuli kunye nee-256ms zayo zokubamba imemori. Kwimi, yinto engumculo womculo wesitoreji esisekho ngaphandle. Kungaphezulu kwesixhobo kunokubambezeleka.
"Ndiyolonwabela ngokwenene ubunjineli, ngoko ke emva kweminyaka ndiqokelele zonke iintlobo ze-preamps, i-compressors, ii-EQ kunye nee-microphones eziqhelekileyo. Kwimi, umbala wesandi uvame ukunyamekela ngakumbi kunamanqaku athile. Ukuba andinayo isandi esilungileyo, akukho manqaku aya kuvakalelwa ngokufanelekileyo, kodwa ngelizwi elifanelekileyo amanqaku aphuma nje kuwe kwaye umculo uqala ukubhala. Ndine-mildly 'ngaphandle kokulawula' imeko yesimo se-modular esisebenzisayo ngamanye amaxesha njengomthombo ozwakalayo kunye nee-VCO zayo ezahlukahlukeneyo kodwa ngokubanzi njengendawo yangaphandle yokucwangcisa impawu. Kuyinto emnandi kakhulu. Iimpawu zeModular kum zinyulu zengqiqo kwaye zinexesha elihle legolide kunye nabaninzi abanokwakha abaqulunqa iimodyuli ezintsha. Yenza ngokukhawuleza ukubuyisela kude kwikhompyutheni yekhompyutheni kwithuba elithile kwaye ilahleke kuloo mingcipheko enembile.
"Ndingathanda ukuchitha ixesha elininzi njengoko ndinako ekuqaleni kweprojekthi nganye yokuqokelela izandi kunye nemifanekiso engasetyenziswa kumanqaku. Ndihlala ndikhangela eso siginesha sisandi. Ngamanye amaxesha kuyinkqubo yokubonakalisa eyenza 'isimo sengqondo,' ngamanye amaxesha ithuluzi elitsha elithengileyo endiyifumene kwiReaktor okanye kwibhanki yeempredishithi endazidala kwisicatshulwa. Ngamanye amaxesha iLute ye-15-stringed eYiputa ndivele nje nge-eBay ebhalwe nge-mic efanelekileyo. "
Kwinqaku lokuqala kulolu chungechunge, umlawuli uLaura Belsey utyunde uluhlu lwe "'emangalisayo' isebe elivakalayo lokudumisa xa uthetha indawo yokudubula. "Ndandimangaliswe ukuba kulungile kangakanani ukuba isandi siphelile xa sicinga ngendlela enokumangalisa ngayo ezinye zeendawo zethu," watsho.
Ilungu eliphambili lesebe ngumxube ococekileyo uScott Harber, i-CSA, ochazwe ngobunzima uBelsey wayebhekiselele kuyo. "Ukufumana ingxoxo ecocekileyo kwizitrato ezixakekileyo kunye nehlabathi ngokubanzi ngumsebenzi esizama ukusombulula ngawo Bosch, "Wandixelela. "Njengazo zonke iimveliso zokudubula kwindawo, sizama ukulawula oko kuqiqayo kwaye sinike iifom ecacileyo zengxoxo yencoko yencoko eya kunceda i-telegraph amagama kunye nebali. Senza oku ngeendlela zangaphandle ezifana nokulawulwa kwezithuthi kunye nokusetyenziswa kweenqwelomoya ze-wireless mics. Ukongezelela, ukuba nentsebenziswano yeSebe lekhamera ibaluleke kakhulu, ngoko siyakwazi ukuguqula umtsalane ukudubula ngokubanzi kunye neelensi ezincinci ngexesha elifanayo. Oku kuvimbela ingxaki edla ngokuqhelekileyo yokubona udonga olubanzi ngelixa uva u-tight, umgcini-mlingisi omncinci osondelene nento ephikisana nokokubonayo. Ngaphandle kooncedo lwabalawuli beZithombe zoMboniso, oku akunakwenzeka nakweliphi na izinga, kunye noPatrick Cady noMichael McDonough baqonda ngokupheleleyo kunye nenjongo yokuxelela ibali kwikhonsathi.
"Inqobo yenkqubo kule mihla iqukethe i-Aaton Cantar i-X3 irekhodi engalinganiyo eyenze inkqubo kwaye isebenza ngokugqithiseleyo, inamandla, kwaye ingabonakali. Isandi kunye nokufumana isakhiwo ndivumele ukuba ndidibanise ngokugqithiseleyo kwaye kushushu kunokudlulileyo kwithuba eliphambili elikuthanda ukulibona nokuliva. Ndiyayithanda intambo ye-metadata kunye kunye nendlela eguquguqukayo ngayo yonke inkqubo. Sisebenzisa i-Lectrosonics iinkqubo ezingenazintambo ze-wire for booms kunye nabalingisi esiwacingayo nge-DPA 4071 okanye i-6061 mics. I-DPAs idibanisa kakuhle kunye ne-boom mics kunye nokugqithisa kakuhle kuzo zonke iingubo eziphathekayo esizihlangabezayo. Kwiingqameko zesibindi, sivame ukusebenzisa i-Sennheiser MKH 50s, i-Schoeps CMIT, okanye i-Sanken CS3's yokutsala ngakumbi kuxhomekeke kwimfuno. "
Abafaki Bosch Uya kuvuyisa ukwazi ukuba uluhlu luye lwavuselelwa kwithuba lesithandathu. Ku Udliwano-ndlebe kunye neTampa Bay Times ngo-Ephreli, IConnelly ibonisa ukuba ixesha elizayo liza kusekelwe kwincwadana yakhe ye-2007 I-Overlook, kodwa, wongezelela, "kunye nezinye izibuyekezo. Kwakusekelwe kukukhuselo; Ngoku kubandakanywa ubugrogasi basekhaya. "Kuya kubakho nezinye izinto ezivela kwiNyuvesi ye-Bosch yakutshanje Ubusuku obungcwele obumnyama, okubhekiselele ekuqhubekeni ngokulandelelana kwebali elibalwe ekupheleni kweNyanga yesihlanu apho uHarry waqala ukukhangela ekubulaweni kwecala lokubanda kwentombazana yentombi yase-Elizabeth Clayton (uJamie Anne Allman), umlutha weziyobisi awayejamelana nawo xa ehamba phantsi i-opioid racket. Ndiqinisekile ukuba ndiyathethelela bonke abalandeli bakaHarry Bosch (kunye noMichael Connelly) xa ndithi ndikhangele phambili ngolo hlobo lwesithandathu (kwaye ngithemba ukuba apheli ixesha).
Icandelo 1 yale chungechunge lingabonwa Apha kunye neCandelo 2 Apha. Ndingathanda ukubonga u-Allie Lee, iNkokheli yoBhengezo kwi-Amazon Prime Video, ngoncedo lwakhe olubalulekileyo ekwenzeni le ngqungquthela yamanqaku anokwenzeka.
Amazon Prime Video UBernard Herrmann Bosch YE I-A-A, Iinkqubo ezahlukeneyo, UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli Jerry Goldsmith Jesse Voccia UJohn Barry UMichael Connolly Iintetho kunye nemisrya Toru Takemitsu BuTeknoloji I-Ultra HD Forum Iinkqubo ezahlukeneyo	2019-06-13
Previous: I-SMPTE iCandelo laseHollywood lokuHlola iHlabathi yeVR immersive ngoJuni
next: I-Danacoid ivakalisa ukwandiswa kwi-Market Market yase-US ngokuvula i-Silicon Valley kwiKomkhulu le-InfoComm 2019